ချစ်ကြည်အေး: အခမ်းနားဆုံးသော သက်ရှိကဗျာသို့
An Asian Tour Operator Fri Aug 26, 01:13:00 PM GMT+8
"ခမ်းနားလှပတဲ့ ရာဇ၀င်များရဲ့ ပိုင်ရှင်..
ဧရာဝတီဘက် က ရပ်တည်ကြပါစို့။
ဧရာဝတီ ကို ဖျက်စီးမည့် အရာအားလုံးမှ ကာကွယ်ကြပါစို့။
Snow Fri Aug 26, 01:24:00 PM GMT+8
ကဗျာတွေကို ဖတ်လေ့ သိပ်မရှိသလို ကြိုက်လည်း သိပ် မကြိုက်တတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကဗျာလေးကိုတော့ ခံစားပြီး နှစ်သက်သွားပါတယ်။
တကယ်ကို ထိထိမိမိ ရင်ထဲက စကားတွေနဲ့ ရေးခဲ့တာပဲ။
Anonymous Fri Aug 26, 01:46:00 PM GMT+8
Anonymous Fri Aug 26, 02:06:00 PM GMT+8
This is so lovely and every word really touched my heart, Ma Ma CKA.
Cameron Fri Aug 26, 02:30:00 PM GMT+8
သက်တန့်ချို Fri Aug 26, 03:16:00 PM GMT+8
ဧရာဝတီ ကဗျာလေး ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ လာခံစားသွားပါတယ် ဂျာ ။
Anonymous Fri Aug 26, 03:29:00 PM GMT+8
SHWE ZIN U Fri Aug 26, 04:21:00 PM GMT+8
ညီမ ရဲ့ ကဗျာလေး ကိုဖတ်ပြီး မျက်ရေတောင် လည် သွားတယ်
ဧရာဝတီ ကို ဘယ်သူ ကယ်တင်ပါ့
Yin Fri Aug 26, 04:31:00 PM GMT+8
မမင်း Fri Aug 26, 04:35:00 PM GMT+8
ညီလင်းသစ် Fri Aug 26, 04:35:00 PM GMT+8
အခမ်းနားဆုံးသော သက်ရှိကဗျာဟာ ကာရန်တွေ ရိုက်ချိုးခံနေရပြီ၊ နရီတွေ ပျက်နေပြီ၊ ပါဒတွေ အစီအစဉ် မကျတော့ဘူး၊ ဒီကဗျာ ဌာန်နဲ့မာန်နဲ့ ဆက်လက် စီးဆင်းနိုင်ဖို့ ကျနော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်၊ ဖြစ်စဉ်တွေက ရင်နင့်ဖွယ် အတိပါပဲ မချစ်ကြည်ရေ...။
မဒမ်ကိုး Fri Aug 26, 05:26:00 PM GMT+8
seesein Fri Aug 26, 05:41:00 PM GMT+8
နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့လည်း မနာ
ဧရာဝတီ ရယ် အားမပျော့နဲ့
ဟုတ် အမချစ် ကျွန်တော်တို့တတွေလည်း
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Fri Aug 26, 05:47:00 PM GMT+8
ဧရာဝတီ ဧရာဝတီ .. ကုန်ပါပြီ ကုန်ပါပြီ ...
rose of sharon Fri Aug 26, 06:16:00 PM GMT+8
ကဗျာဖတ်ရင်း ကြက်သီးတွေထမိတယ်... ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာ
ဇွန်မိုးစက် Fri Aug 26, 09:12:00 PM GMT+8
မရေ... သတင်းတွေ ကြားပြီးကတည်းက ရင်ထဲမှာ ဆူပွက်နေခဲ့တာပေါ့။
အွန်လိုင်းမှာရော၊ လမ်းပြကြယ်မှာပါ ဆိုင်းထိုးထားတယ်။ ကိုယ်နိုင်သလောက် ကူညီကယ်မဖို့ ညိုလေးနဲ့နှစ်ယောက်သား စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။
ဒီလာမယ့် တနင်္ဂနွေ ၃နာရီ Fort Canning Park မှာ ဧရာဝတီကယ်တင်ရေး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲရှိတယ် အစ်မ။
mstint Fri Aug 26, 09:21:00 PM GMT+8
ရင်တွင်းခံစားချက် ကဗျာလေးကို တူညီတဲ့ခံစားချက်နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်ကွယ်။ တို့များဧရာဝတီ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီးဆင်းနိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုချွေခဲ့တယ်။
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) Fri Aug 26, 09:42:00 PM GMT+8
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ချိနှဲ့နေပေမဲ့လည်း ဧရာဝတီကတော့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ သူက ချစ်တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်တွေကို နောက်ဆုံး ရေတစ်ပေါက်ထဲ ကျန်တဲ့အထိ ပေးဆပ်နေမှာပါ။ ကျန်းမာပါစေ ဧရာဝတီ။
...အလင်းစက်များ Fri Aug 26, 11:01:00 PM GMT+8
စာသားတွေ ရင်ထဲမှာ ပဲ့တင်သံ ထပ်ပြီး ကျန်ခဲ့သလိုပဲ အစ်မချစ်... “ငါတို့ သိပ်မချမ်းသာပါဘူး... ငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်း ဆိုလို့သူနဲ့အခြား လက်ချိုးရေလို့ရတာလေးတွေပါ (ကျန်တာတွေ တကယ်ကို ကိုယ်မှ မပိုင်တာပဲလေ နော) ဒါလေးတော့ ချမ်းသာပေးကြပါလို့” ရင်နင့်နင့်နဲ့ပဲ .............
blackroze Sat Aug 27, 01:35:00 AM GMT+8
ညိမ်းနိုင် Sat Aug 27, 03:05:00 AM GMT+8
တစ်သွေးတစ်သားတည်းအတူ မေတ္တာဆေးမြီးတိုနဲ့ တတ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sat Aug 27, 02:05:00 PM GMT+8
ဧရာဝတီကို မှီခိုပြီး နေထိုင်ကြီးပြင်းလာကြရာက
ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးပြန်စွပ်ပြီး ရောင်းစားဖို့ကြံစည်တာ ရက်စက်လွန်းပါတယ်.
ဧရာဝတီတည်တံ့ဖို့ဆိုတာ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူမိတယ်
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး တော်တော်ခံစားမိတယ် အစ်မရေ
ချစ်ကြည်အေး Sat Aug 27, 04:00:00 PM GMT+8
ဒီကဗျာရေးချိန်မှာ ကျွန်မ မျက်ရည်ဝဲရင်း ရေးခဲ့တာပါ။
ဧရာဝတီအတွက် ကျွန်မတို့အားလုံး နှလုံးသားတွေ ထပ်တူပဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်...
ရေးဖော် မိတ်ဆွေ စာဖတ်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
PhyoPhyo Sat Aug 27, 09:53:00 PM GMT+8
ဧရာဝတီရှင်သန်ပါစေ။ တတ်နိုင်တာရှိရင်ဧရာဝတီရှင်သန်ခွင့်အတွက်ကြိုးပမ်းချင်ပါရဲ့ မချစ်ကြည်ရယ်
susu Sat Aug 27, 10:30:00 PM GMT+8
Sonata Cantata Sat Aug 27, 11:57:00 PM GMT+8
အင်ကြင်းသန့် Mon Aug 29, 10:58:00 AM GMT+8
မြသွေးနီ Mon Aug 29, 01:46:00 PM GMT+8